Indlela yokwenza izipikili ezintle?
Ngubani phakathi kwethu ongaziva ngcono xa unokuziqhayisa izipikili ezintle? Ukuhamba kwi-salon enobuhle kunye nokuhleleka komzimba kulungile, kodwa yintoni ongayenza ukuze izipikili zakho zibukeke zihle ngeveki. Indlela yokwenza izipikili ezintle, sifunda kweli nqaku.
Yintoni efanelekileyo yezipikili kunye nento engalungile kwiispiki?
- Vala ingxenyeni yangaphandle yezipikili nge-varnish, iya kukhusela izipikili, ukunceda ukukhusela umonakalo we-nail, ngelixa iiphonkwane zibamba umquba.
- Ukuthintela ukucima kunye nokomisa, gxobhoza indawo yecactic rhoqo.
- Ukukhusela i-cuticles kunye nezipikili xa uhlamba izitya, engadini nasemsebenzini ekhaya, gqoka iiglavu.
- Ngoxa usebenza eofisini, qaphela, njenge-cuticles kunye nezipikili zonakaliswe xa usebenza namaphepha, xa uthayipha kwibhodi, xa uvula iileta.
- Sebenzisa i-cream ngesandla uze uhlambe izandla zakho, kwaye ungakulibali ukufaka isicelo kwi-cape.
- Ebudeni bemini, gxiba izandla zakho kunye ne-cutic sunscreen ukuze uzikhusele elangeni.
- Izixhobo ezicocekileyo kunye neekhonkwane zeekhonkco ngokuphindaphindiweyo, utshintshe rhoqo iifayile zeepiki, njengegciwane kunye neebhaktheriya zinokusabalalisa izixhobo zesikhonkwane.
- Musa ukusebenzisa imveliso enjalo ngezipikili, eziqukethe i-toluene okanye i-formaldehyde. Ziyingozi kwimpilo yezipikili.
- Musa ukuvula iinakho ngezipikili.
- Musa ukugcina iminwe yakho ende emanzini, ungasebenzisi i-detergent okanye isepha xa ususa izipikili zakho, ngenxa yoko, ukonakalisa izipikili kunye nesakhiwo se-cuticle.
- Ungayisebenzisi kakubi umbane ukususa i-varnish, kodwa kufuneka usebenzise inani elincinci lalo ukuze lingathinteli ulusu kunye ne-cuticle ixesha elide.
"Musa ukunyusa i-cuticle kude." Yiyeke yedwa, yinqumle xa ivela kwi-nail.
- Musa ukuyihoxisa ukuvuvukala kwesikhonkwane okanye itekisi. Ngokukhawuleza xa unako, unqakraze isikhumba nge-antibacterial agent. Sitshintshe nayiphi na isikhophelo kwi-dermatologist.
Yenza izipikili ezihle
Lo msebenzi awunzima, ukukhula izipikili ezintle, oku kuya kufuneka uchithe umzamo omkhulu. Ngokufanelekileyo, akufanele udibanise nabantwana, ungahlambi, ungagcini, ungahlambi izitya, kwaye ungaphefumli kwiisilumko zakho. Kodwa le ngcebiso ayiyi kusebenza. Ngoko cinga ngobuhle bezipikili. Kufuneka unike izipikili ngendlela efanelekileyo, ukuze kungabikho i-burrs, ukungalingani, iikona ezibukhali. Ngenxa yoko, iifayile zeedilesi zisetyenzisiweyo, ngoku iifayili zeplastiki zeplastiki zithengiswa, kufuneka zifumaneke. Ifayile kufuneka ifakwe kakuhle. Ubume besikhonkwane singanikezwa ngokunyakaza kwelinye icala, sisuka kwisiseko ukuya kwiziko, ukuze ungaphazamisi isakhiwo sepiyile, into ephambili apha ayikukukhawuleza.
Iipilisi zifuna ukuphumla
Kwezihlandlo ezimbini ngeveki ezimbini kufuneka uzinike ukuphumla, ungagubungeli ngevarnish, shiya wedwa, unike amandla kwaye uphefumlele umoya omtsha. Igosa elomelezayo elona ityuwa elwandle. Ukuze senze oku, senza ubhado oluqinileyo: thabatha ityuwa yelwandle itaspoon uze uchithe kwisitya esinegunya lesigamu sesitha, engeza i-drop of iodine kwaye ubambe emanzini afudumele imizuzu eyi-15. Iitrayi ezinjalo zesikhonkwane zenziwa nsuku zonke.
Izikhonkwane ezihle, into omele uyenze malunga nokuhleka komzimba
Amanzi enzentyambo, ulwandle, ilanga alinakomelela izikhonkwane, le ngxaki ibalulekile ngoku.
Iseluleko esilula ngokunyamekelwa kwesikhumba kunye nezipikili ezintle
1. Izipikili ezintle zizalisekisa kakuhle izandla kunye nezandla ezilungileyo, kufuneka uqaphele izipikili zakho zonke iintsuku. Xa kukho iingxaki kwiisilumko, kubonisa ingxaki yempilo. Isakhiwo seenkono zihluka phantsi kweempembelelo zomsebenzi obalaseleyo, ukunakekelwa okungafanelekanga, ukutya okunomsoco, i-ecology, kwaye unokumiselwa ngokuzalwa. Impilo yezipikili, ukutya kufuneka kube kunye kunye kwaye kuqulethwe amaminerali kunye namavithamini.
2. I- Vitamin A iyadingeka ukuqinisa nokukhula izipikili, itholakala kwiidroti, imifino, utamatisi, esibindi, kwioli. I-Vitamin B ikhuthaza ukunyuswa kwamaprotheni kwaye ikhuthaza ukukhula, itholakala kwiingqolowa zengqolowa, i-yolk yeqanda, iklabishi, imvubelo ye-brewer. Iodine inceda ukubethela kakuhle kwaye iqulethwe kwisipinashi, ulwandle oludala. I-silicon ibalulekile kubunzima kunye ne-elasticity of nails, kwaye itholakala kwimifuno. I-calcium itholakala kwimveliso yobisi kwaye kubalulekile ukukhuni kwezipikili. Ukwakheka kwetafile. Isiqulatho sinokuthintela ukuvutha, kwaye kuyimfuneko yokwakhiwa kwesilumko, sitholakala kwiikomkom, i-anyanisi, iklabishi.
3. Ukwenziwa komntu kufuneka kwenziwe kwimihla engama-14.
4. Utywala lokususa i-varnish kufuneka ube ngaphandle kwe-acetone, kufuneka usebenzise izimonyo zekhwalithi.
5. Ngobusuku kuyanconywa ukuba kucoce ngekhilimu enomsoco.
6. Izikhonkwane akufanele zihlale phantsi kocwangco lwe-varnish, kungcono ukususa i-varnish ebusuku. Okanye unike izipikili ukuphumla zonke iintsuku ezintlanu iintsuku ezimbini.
7. Ubumhlophe obuvela kwiikhonkwane buya kususwa xa ugoba nge slice lemon. Oku kuya kuqinisa kunye nokukhanyisa izipikili.
8. Ukutya ukutya okuqulethe i-gelatin, ikhukhula, i-jelly, igalelo kumandla nokukhula kwezipikili. Kufuneka uwathathe inyanga enye, kwaye emva kwenyanga ufanele ukuphinda ikhosi.
Sidibanisa isipuni sesosi, i-yolk, enye ithispoon ye-oatmeal. Lubhalele olu hlobo lwezandla uze ufake iiglavu zengubo. Mask smoem ngemizuzu engama-20, kunye ne-smear enekhenkce enesondlo.
Siza kubilisa iitapile ezintathu, siza kuphulaphula ubisi. Sifake izandla kwi-gruel kwaye sibeke izandla zakho kulo bunzima de ibe ipholile. Geza izandla kunye namanzi kwaye usebenzise ukhilimu onomsoco ezandleni zakho.
Sixuba i-teaspoon yobusi, i-tablespoon yeoli yeoli, i-yolk enye. UVoterem ezandleni zemizuzu engama-20. Geza ngamanzi kwaye usebenzise ukhilimu onondla.
Kuyathakazelisa ukwazi ukuba:
- Iiphonkco zifile, azilimazi ukufaka ifayile.
- Ebusika, izipikili ezandleni zikhula ngokukhawuleza, kwaye ehlotyeni - ngokukhawuleza.
- Kwabesetyhini, izipikili zikhula ngokukhawuleza, kunye namadoda - ngokukhawuleza.
- I-Lefties ikhula ngokukhawuleza ngezandla zabo ezisekhohlo, ngelixa i-right-handed ngezandla zabo zokunene zikhula ngokukhawuleza.
- I-epilisi ye-nail ehlaziywe emva kweentsuku eziyi-115.
- Abantu abahlala kwizidlo, izipikili zabo zikhula ngokukhawuleza, ngoko akukho izondlo ezaneleyo kunye neeprotheni.
Uyazi indlela yokwenza izipikili ezintle, sebenzisa ezi ngcebiso, kwaye unokwenza izipikili zakho ziphilile, zinamandla kwaye zintle.
Iingxaki ezibuthakathaka neziphazamisayo, indlela yokujongana nale nto?
Iintliziyo zentliziyo: senza i-manicure ngoFebruwari 14
Ukupenda kwesikhonkwane ekhaya
Ukucwiliswa kwamanzi okuthakazelisayo: iimfihlelo, iteknoloji, iingcamango
Isaladi kunye ne-squid kunye nengqolowa
I-Fondant yekhekhe yePasika - iprotheni, esuka kwishukela ephotywe, kunye ne-gelatin - zokupheka kunye neziteyathelo ezithatha ngeyanyathelo
Indlela yokubopha i-bolero ngeenaliti zokudibanisa
Yenza i-prom for princess
Indlela yokunyamekela iimpahla ezenziwe ngesikhumba
Ukukhulisa imirrle ekhaya
Imiqondiso yangaphandle nangaphakathi yangomdlavuza webele
Kwenzeka ngokukhawuleza ukuba ubuyele emva kwesiqhelo emva kokunikezelwa: imithetho emithathu yobuhle nguPolina Gagarina
Izifo ezibangelwa ukungondleki kwabantwana